ပရိဘောဂ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း - Myanmar House Search Engine
ငှားမည် - အိမ်
ငှားမည် − တိုက်ခန်း
ငှားမည် - အဆောင်
ငှားမည် - ရုံး ဆိုင် မြေကွက်
ဝယ် / ငှားလိုသည်
Myanmar House Search Engine
? အခြား ရောင်းဝယ်ငှား - All others Houses, Condo, Apartments, Flats, or Land Plots
မြို့နယ်အလိုက် » ဗိုလ်တထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းပဲတန်း၊ လသာ၊ စမ်းချောင်း၊ ဗဟန်း၊ ဒဂုံ၊ ရန်ကင်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင် ...
စျေးနှုန်း အလိုက် » သိန်း ၁၀၀ အောက်၊ ၁၀၀−၂၀၀ ကြား၊ ၂၀၀−၅၀၀ ကြား၊ ၅၀၀−၁၀၀၀ ကြား၊ ၁၀၀၀ အထက် ...
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းစရာ ရှိလား? ငှားစားဘို့ ရှိနေလား? ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
WARNING: You are not logged in!
You may post ads without logging in, but you will not be able to modify or delete them.
Please register for an account and log in for full access.
Please read our rules before posting ads!
Category -- ရောင်းမည် - For Sale ငှားမည် - For Rent မျိုးစုံ - Mixed အလိုရှိသည် - Wanted
-- တိုက်ခန်း ရောင်းမည် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည် မြေကွက် ရောင်းမည် ကြိုပွိုင့် ရောင်းမည် အဆောင် ငှားမည် တိုက်ခန်း ငှားမည် လုံးချင်းအိမ် ငှားမည် ရုံး ဆိုင် မြေကွက် ငှားမည် အခြား ရောင်းဝယ်ငှား ဝယ်လက် / ငှားလက် ပရိဘောဂ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း တိုက်ခန်း လုံးချင်း၊ ခြံမြေ၊ ဂိုဒေါင် စသည်
ဈေး / price
မြေအမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ မသိ / unknown အရပ်စာချုပ် / agreements ပါမစ်မြေ / permit စလစ် / slip ဂရံခွဲ / sub-grant ဂရံမြေ (အမည်မပေါက်) / grant not-updated ဂရံမြေ (အမည်ပေါက်) / grant updated ဘိုးဘွားပိုင် / freehold
ရောင်းချသူ / Seller
ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် / owner ပိုင်ရှင် SP / special powered owner အကျိုးဆောင် / agent အခြား
တည်နေရာ ရွေးချယ်ပါ ကျောက်တံတား 11181 ကြည့်မြင်တိုင် 11101 စမ်းချောင်း 11111 ဒဂုံ 11191 ပန်းဘဲတန်း 11141 ဗဟန်း 11201 လသာ 11131 အလုံ 11121 တောင်ဥက္ကလာ 11091 ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 11441 တောင်ဒဂုံ 11431 မြောက်ဒဂုံ 11421 အရှေ့ဒဂုံ 11451 ပုဇွန်တောင် 11171 ဗိုလ်တထောင် 11161 မြောက်‌ဥက္ကလာ 11031 သင်္ဃန်းကျွန်း 11071 တာမွေ 11211 ဒေါပုံ 11241 မင်္ဂလာ‌တောင်ညွန့် 11221 ရန်ကင်း 11081 သာကေတ 11231 ကမာရွတ် 11041 မင်္ဂလာဒုံ 11021 မရမ်းကုန်း 11061 ရွှေပြည်သာ 11411 လှိုင် 11051 လှိုင်သာယာ 11402 အင်းစိန် 11011 AYA ဧရာဝတီတိုင်း BGO ပဲခူးတိုင်း CHN ချင်းပြည်နယ် KCN ကချင်ပြည်နယ် KYH ကယားပြည်နယ် KYN ကရင်ပြည်နယ် MDY မန္တလေးတိုင်း MGW မကွေးတိုင်း MON မွန်ပြည်နယ် NPT နေပြည်တော် RKN ရခိုင်ပြည်နယ် SGN စစ်ကိုင်းတိုင်း SHN ရှမ်းပြည်နယ် TNT တနင်္သာရီတိုင်း အခြား / others
အခြား ဖော်ပြချက်များ / Details..
Display the map on my ad
If Google Maps can't find your address, you can drag the marker to the correct position
Max Number of Pictures: / 1
Your current balance credits
Total Cost credits
Which mobile phone company do you use? ဘယ်တယ်လီဖုန်း ကုမ္ပဏီကို သုံးပါသလဲ?
Do you use MPT ?
Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT (Myanmar Post & Telecoms), Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you toabrief survey.
Myanmar House Search Engine /
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းစရာ ရှိလား? ငှားစားဘို့ ရှိနေလား?
ပွဲစားခ ပေးရန် မလိုပါ။ အခမဲ့ ကြော်ငြာထည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
ကျောက်တံတား 11181 ကြည့်မြင်တိုင် 11101 စမ်းချောင်း 11111 ဒဂုံ 11191 ပန်းဘဲတန်း 11141 ဗဟန်း 11201 လသာ 11131 အလုံ 11121 တောင်ဥက္ကလာ 11091 ဒဂုံဆိပ်ကမ်း 11441 တောင်ဒဂုံ 11431 မြောက်ဒဂုံ 11421 အရှေ့ဒဂုံ 11451 ပုဇွန်တောင် 11171 ဗိုလ်တထောင် 11161 မြောက်‌ဥက္ကလာ 11031 သင်္ဃန်းကျွန်း 11071 တာမွေ 11211 ဒေါပုံ 11241 မင်္ဂလာ‌တောင်ညွန့် 11221 ရန်ကင်း 11081 သာကေတ 11231 ကမာရွတ် 11041 မင်္ဂလာဒုံ 11021 မရမ်းကုန်း 11061 ရွှေပြည်သာ 11411 လှိုင် 11051 လှိုင်သာယာ 11402 အင်းစိန် 11011 AYA ဧရာဝတီတိုင်း BGO ပဲခူးတိုင်း CHN ချင်းပြည်နယ် KCN ကချင်ပြည်နယ် KYH ကယားပြည်နယ် KYN ကရင်ပြည်နယ် MDY မန္တလေးတိုင်း MGW မကွေးတိုင်း MON မွန်ပြည်နယ် NPT နေပြည်တော် RKN ရခိုင်ပြည်နယ် SGN စစ်ကိုင်းတိုင်း SHN ရှမ်းပြည်နယ် TNT တနင်္သာရီတိုင်း အခြား / others -- ရောင်းမည် - For Sale ငှားမည် - For Rent မျိုးစုံ - Mixed အလိုရှိသည် - Wanted -- တိုက်ခန်း ရောင်းမည် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည် မြေကွက် ရောင်းမည် ကြိုပွိုင့် ရောင်းမည် အဆောင် ငှားမည် တိုက်ခန်း ငှားမည် လုံးချင်းအိမ် ငှားမည် ရုံး ဆိုင် မြေကွက် ငှားမည် အခြား ရောင်းဝယ်ငှား ဝယ်လက် / ငှားလက် ပရိဘောဂ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း တိုက်ခန်း လုံးချင်း၊ ခြံမြေ၊ ဂိုဒေါင် စသည်
သင့်တင့် / moderate အသစ်စက်စက် / brand new အဟောင်း / used
Copyright © 2020 Myanmar House Search Engine. All Rights Reserved.